Antananarivo Renivohitra : Mitohy ny asa fanamboaran-dalana -
AccueilSongandinaAntananarivo Renivohitra : Mitohy ny asa fanamboaran-dalana
Antananarivo Renivohitra : Mitohy ny asa fanamboaran-dalana
11/08/2018 admintriatra Songandina 0
Mitohy hatrany ny asa fanamboaran-dalana eto Antananarivo Renivohitra araka ny toromariky ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery. Tanjona ny hanatsarana hatrany ny fifamoivoizana sy ny fivezivezen’ny mponina, indrindra fa ny eny amin’ireo faritra izay tena ahitana ny fitohanan’ny fiara lavareny. Ho an’ny lalana mampitohy ny Gare Soarano sy ny sampana eny amin’ny Petite vitesse izay atao rarivato amin’izao fotoana izao, dia efa vita ny 30 isan-jato. Eo ihany koa ny lalana izay mampitohy an’Andranomena sy Ambatolampy, isan’ny tena nampikaikaika ireo mpampiasa lalana. Ankehitriny, 90 isan-jaton’ny asa no vita, natao tara ny ampahany ary “béton” ny sasany, indrindra fa eny amin’ireo toerana izay matetika hiangonan’ny rano, ary misy ihany ireo natao rarivato. Tsy natao ambanin-javatra ihany koa ny asa fanamboarana ny lakandrano manaraka ny arabe mba hisorohana ny fiandronan’ny rano, izay mety hitarika haingana ny fahasimban’ny arabe.
Ho an’ny lalana Ambodin’Isotry (Aigle noir), ny lalana mampifandray an’Itaosy sy Ampasika, ny lalana eny Andohatapenaka, ary ny lalana manodidina ny farihy Behoririka dia efa vita tanteraka amin’izao fotoana izao, efa azo hifamezivezena, taorian’ny fanaraha-mason’ireo teknisianina eo anivon’ny minisiteran’ny Asa vaventy sy ny Fotodrafitrasa. Marihina fa volam-panjakana madiodio avokoa no nentina nanatanterahana ireo asa rehetra ireo.
Noporofoin’ ireo mpanohana an’i Marc Ravalomanana fa tsy azo hahodikodina ny safidin’izy ireo, antony nahatongavan’ny fahatongavana maro nandritra ny hetsika ny asabotsy teo teny amin’ ny parvis ny lapan’ ny tanana. Raha ny zava-nisy teny ...Tohiny
Filoha Rajaonarimampianina:“MILA MIFANOME TANANA ISIKA”
Hery Rajaonarimampianina : « Tsy financement parallèle ny fanampiana avy amin’i Sina »